डरलाग्दो सपना देखियो – के हुने होला ? |
डरलाग्दो सपना देखियो – के हुने होला ?
Posted on May 15, 2010 by Yonepal
सपना नराम्रो देखेँ, अब के हुने होला, डर लागिरहेको छ’ धेरै मान्छेले यस्तो भनेको सुनेका छौँ, हामीले　। प्रायः साना नानीहरू कहिलेकाहीँ निद्राबाट उठेर चिच्याउँछन्, रुन्छन्　। त्यतिखेर उनीहरूले नराम्रो सपना देखेका हुन्छन्　। नराम्रो सपना देखियो के हुने होला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि पाइन्छ समाजमा　। राम्रो/नराम्रो जे देखिए पनि सपना, सपना नै भएकाले केही गर्दैन　। तर, लगातार नराम्रो सपना देखिन्छ, राम्ररी निदाउन दिँदैन, घरी-घरी ब्युँझाउँछ, ब्युँझदा पसिनाले शरीर भिजेको हुन्छ, जिउ लगलग कामेको हुन्छ, डर लागिरहेको छ भने त्यसले बच्चालाई मात्र होइन, ठूलालाई पनि आत्मविश्वासमा क्षति पुर्‍याउँछ　। नराम्रो सपना देख्दा बच्चाहरू चिच्याउँदै उठ्छन्　। कहिलेकाहीँ ठूलै मान्छे पनि सपनामा रुन्छन्　।
नराम्रो सपना दुई प्रकारको हुने गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. कपिलदेव उपाध्याय बताउँछन्　। चिकित्सा भाषामा त्यसलाई ‘नाइट मेयर’ र ‘नाइट टेरर’ भनिन्छ　। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू अचानक उठ्न सक्छन्　। हिँड्न वा रुन पनि सक्छन्　। ठूलाले सुत भन्दा सुत्छन्　। भोलिपल्ट किन उठिस् भन्दा डरलाग्दो सपना देखेँ भन्छ　। सपनामा यस्तो भयो भन्छ　। त्यस्तोलाई नाइट मेयर भनिने उपाध्यायले जानकारी दिए　।
त्यस्तै, राति तर्सियो, रोयो, करायो तर भोलिपल्ट केही सम्झिन सकेन भने त्यस्तोलाई ‘नाइट टेरर’भनिने उनले जानकारी दिए　। बालबालिकामा तनाबका कारण त्यस्तो हुने गर्छ　। ‘विद्यालयमा उसलाई समस्या छ, गुरुले पिट्छन्, साथीले पिट्छ, तर्सिएको छ भने बच्चा सपनामा रुने, कराउने गर्न सक्छ,’ उपाध्यायले भने　।
त्यस्तै, बाबु-आमाले पनि भूत आउँछ, माग्नेले लैजान्छ भनेर बच्चालाई तर्साउने गर्छन्　। त्यसो गर्नु एकदमै गलत भएको उनको भनाइ छ　। मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रस्त बालक एक्लै हुँदा डराउँछ र राति पनि सपनामा त्यही कुरा देख्ने गर्छ　। बच्चा यदि कुनै कुरासँग डराएको छ भने उसको डर कम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ　। जेबाट डराएको छ, त्यसैको नजिक लाने, यदि अँध्यारोसँग डराएको हो भने अँध्यारोमा लाने आफूले छुने र उसलाई त्यसले केही गर्दैन भन्ने आत्मविश्वास दिलाउनुपर्ने उनको सुझाब छ　। उसलाई डरलागेको विषयसँग राम्ररी परिचित गराउँदा डर आफैँ कम हुन्छ　। तर, बच्चाहरू सपनामा रुने, कराउने गर्नु सामान्य भएको उनको भनाइ छ　। तर, धेरै नै तर्सिएको छ भने आमाबाबुले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ　।
त्यस्तै, आमासँग छुट्नुपरे पनि बच्चा डराउने गर्छ　। यसलाई ‘सेपेरेसन एनजाइटी’ भनिन्छ　। आफूले छोड्दा आमालाई केही भइहाल्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ, बच्चालाई　। त्यसैले छुट्न मान्दैनन्　। विद्यालय जान पनि मान्दैन भने त्यस्तोमा आमाले पुर्‍याउन जानुपर्ने उनको सुझाब छ　। ठूलो भएपछि समस्या आफँै कम हुन्छ　।
हरेक दिन नराम्रो सपना देख्न थालियो र उठेर हिँड्न लागियो भने परिस्थिति गम्भीर हुन्छन्　। त्यस्तो अवस्थामा खेलाची गर्नुहुँदैन　। विद्यालयमा र घरमा पनि बच्चाले असुरक्षित महसुस पो गरेको छ कि त्यसबारे विचार गर्नुपर्छ　। युवा अवस्थाका मानिसले लगातार नराम्रो सपना देख्न थाले भने त्यसको पनि नजिकबाट अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको उपाध्याय बताउँछन्　। तनाबका कारण पनि मानिस निद्रामा रुने, कराउने गर्छन्　। कहिलेकाहीँ उठेर पनि हिँड्न सक्छन्　। सानोमा ती कुरा सामान्य भए पनि कहिलेकाहीँ ठूलै मानिस पनि हिँड्ने गर्छ　। त्यस्तोमा सुत्नुअघि नै झ्याल-ढोका राम्ररी बन्द गर्नुपर्छ　। अन्यथा लडेर चोटपटक लाग्न सक्छ　। केही मान्छे निद्रामा कुरा पनि गर्ने गर्छन्　। कहिलेकाहीँ हाँस्न सक्छन्　। निद्रामा गरेको कुराकोे खासै अर्थ हुँदैन　। किनभने, निद्रामा गर्ने कुरा पूरा हुँदैन　।
सपनामा डरलाग्दो कुरा देखेर तर्सिने समस्या ठूलो भएपछि आफँै कम हुन्छ　। तैपनि समस्या निरन्तर छ भने त्यसको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्छ　। सुत्न जाँदा नडराइ जाने, नराम्रो सपनालाई सामना गर्न तयार भएर जाने, सपना नराम्रो देखिन्छ कि भन्ने तनाबबाट मुक्त हुने र मनमा रहेका अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ पहिल्यै खोज्नाले पनि धेरै हदसम्म कम हुन्छ　। तपाईं सुत्न सक्नुभएन भने उठ्नुहोस् र केही गर्नुहोस् डराएर ओच्यानमै पल्टि नरहनुहोस्　। तपाईंलाई अन्य कुराले नै सताएको हुन सक्छ, निद्रा नपुगेर होइन　।
« यि हुन अमेरिकाका हट हट गर्ल बग्रेल्ती टङकिस र बेडसिन »